Ipasta enesipinatshi kunye netshizi yesosi, isitya esityebileyo nesilula ukwenza. | Ukupheka kweKhitshi
UMontse Morote | | Amangenelo ashushu, IPasta
Namhlanje ndiphakamisa iresiphi ipasta enenyama, isipinatshi kunye nesosi yesonka samasi. isidlo esihle kakhulu nesipheleleyo. Iresiphi elula exabisa isitya esinye, kuba inemifuno ebandakanya konke, kodwa njengoko ixutywe nepasta kunye nesosi yesonka samasi, ayiqapheleki kwaye ilunge kakhulu, ilungele abo bakufumanisa kunzima yitya imifuno.
Isitya esiphumelele endlwini yam, ndiyasilungisa ngeendlela ezahlukeneyo, kunye nenyama, isipinatshi ndedwa kunye nesosi yesonka samasi kwaye isipinatshi asithandi kakhulu, kodwa bayayithanda loo ndlela.
350 gr. ipasta
1 ibhegi yesipinatshi
200 ml. Ubisi olumphunga okanye ukhilimu olwelo
100 gr. itshizi egayiweyo
Ukulungiselela ipasta kunye nesosi yesonka samasi, siqala ngokuthatha ipani kunye namanzi ngetyuwa encinci. Xa iqala ukubilisa siza kufaka ipasta, siya kuyipheka ide ibe dente de ibe ilungile njengoko kubonisiwe ngumenzi. Xa kuphekiwe, yidreyini uze uyigcine.
Chuba itswele usike ube ngamaqhekeza amancinci kakhulu.
Kwelinye icala siza kufaka i-casserole enkulu okanye ipani, songeze i-jet elungileyo yeoyile, xa kushushu sifaka itswele enqunqiweyo, siya kuyishiya ide ifakwe poached kwaye igolide encinci.
Xa itswele likho siza kongeza isipinatshi esigeziweyo. Siza kubasonga kunye kunye netswele.
Emva kokuba isipinatshi sigxothiwe, yongeza ubisi oluphucukileyo okanye ukhilimu olulwelo. Nje ukuba yonke into ixutywe siza kongeza itshizi egreyithiweyo malunga ne-2-3 yeepuni zesonka samasi. Siza kuyivumela ukuba idibane kwaye siyivavanye de ibe kuthanda kwethu. Ungongeza ngaphezulu itshizi okanye ubisi, kuxhomekeke kwindlela oyithanda ngayo isosi.
Sifaka ityuwa encinci kunye nepepile.
Songeza ipasta kunye nesosi. Sidibanisa kakuhle. Ungabeka izitya ezimbini ngokwahlukeneyo kwaye nganye nganye ibeke ipasta kunye nesosi. Kodwa ndiyixube yonke, ndiyithanda ngcono.
Kwaye ilungele ukutya !!! Ilula kakhulu, isitya esikhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » Amangenelo ashushu » Ipasta enesipinatshi kunye netshizi yesosi
Mholo! Ijongeka intle, kodwa andiyiboni inyama naphina.